Black Lagoon nke Urbión | Akụkọ Njem
Itingga ebe ndị mara mma dị egwu bụkwa ezigbo echiche maka mgbapụ. Na nke a anyị na-ekwu maka ya Black Lagoon nke Urbión, nke dị na Castilla y León. Osimiri a sitere na ice ma dị na mpaghara okike nke Picos de Urbión na Sierra Cebollera na obodo Vinuesa, Covaleda na Duruelo de la Sierra.
Y’oburu n’inwe obi iru ala lekwasi anya na oghere ekere eke, obu nnukwu echiche ị ga-aga Black Lagoon nke Urbión, Ebe ọ bụ na ọ dị na mbara igwe mara mma nke anyị nwere ike inyocha. Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee n'akụkụ a nke okike na Castilla y León.
1 Mara na Black ọdọ nke Urbión
2 Uzo esi aga na Black Lagoon
3 Ihe ị ga-eme na Black Lagoon
4 Nleta Vinuesa
Mara na Black ọdọ nke Urbión
Nwa Lagoon dị na n'ebe ugwu nke Soria na mpaghara a maara dị ka Ogige Eke Eke nke Osimiri Ojii na Glaciers nke Urbión. Mpaghara mmiri a dị na elu nke mita 1.773, nke ugwu na ebe osisi gbara gburugburu nke beech na pine na-ebuwanye ibu. Dabere na oge, lagoon nwere ọdịdị dị iche, ebe ọ bụ n'oge oyi enwere snow na oge ọkọchị ị nwere ike ịhụ ụda akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke oke ọhịa. Agba nke ọdọ mmiri nwere ike ịpụta ọchịchịrị n'oge oyi, mana ọ nwere ike ịpụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'oge ọkọchị. Ọ bụ odida obodo nke dịgasị iche dabere na oge.
Ogige a nwere ọtụtụ ihe ịhụ n'etiti Ohia hekta 5.000 na anụmanụ. Ọnụ ọgụgụ kasị elu ya bụ Pico Urbión nke dị mita 2.228 dị elu. Na mgbakwunye, ọ nwere peculiarity nke ịnwe ọdọ mmiri ndị ọzọ dị nso, Laguna Helada na Laguna Larga. Enwere akụkọ banyere Black Lagoon, na ọ bụ na ha na-ekwu na ọ nweghị ala, yana ọ nwere ọwara n'ime omimi ya nke rutere kpọmkwem n'oké osimiri. Otú ọ dị, ha bụ naanị asịrị, n'ihi na ọ gosipụtara na ala ya dị omimi nke asatọ. Kwa afọ Sọnde mbụ nke Ọgọstụ bụ ịgafe mmiri nke Laguna Negra, ihe omume na mpaghara ahụ.
Uzo esi aga na Black Lagoon
Getga Black Lagoon dị mfe n'ihi na egosiri ya nke ọma, ebe ọ bụ ebe ọ dị na afọ ndị na-adịbeghị anya enweela mmụba ka ukwuu. Zọ kachasị mma iji ruo ebe ahụ bụ site n'obodo Vinuesa, obodo dị nso na Soria. Ọ bụrụ na anyị ahapụ obodo a, anyị ga-ewere okporo ụzọ N-234 wee buru ụzọ gaa Cidones na SO-810 ruo Vinuesa. Ozugbo anyị nọ n'ime obodo, anyị ga-eso ụzọ ọhịa nke dị na mpaghara azụ obodo ahụ, tupu osimiri Revinuesa. Soro egwu a wee rute Ogige ọdụ ụgbọ ala Laguna Negra ebe ị nwere ike ịhapụ ụgbọ ala gị. Hapụ ụgbọ ala ebe a na-adọba ụgbọala nwere ọnụ ala dị ala, nke na-agụnyekarị ohere ị ga-eleta Vinuesa Forest Museum.
Site na ọdụ ụgbọ ala a, enwere nhọrọ abụọ, dabere na anyị dị njikere ịga ije ma ọ bụ na-ahọrọ ụdị nke kachasị mma. Anyị nwere ike ime ụzọ n'ụkwụ ma ha kilomita abụọ ma ọ bụ were ụgbọ ala nke na-ewetara anyị nso na lagoon. Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na bọs a dị naanị site na July ruo Septemba, ya bụ, n'oge dị elu. oge fọdụrụ anyị ga-eje ije ọdọ mmiri. Usesgbọ ala na-agba ọsọ ọkara ọkara ọ bụla. Site n ’ebe bọs rapuru gị, o nwere ebe dị mita ole na ole iji ruo ọdụ mmiri ahụ.
Ihe ị ga-eme na Black Lagoon
Black Lagoon bụ oghere sitere n'okike nke na-enye anyị ebe mara mma nke izu ike na ikuku ikuku dị mma. Enwere ịzọpụta osisi iji hụ ọdọ mmiri ahụ dum, ya mere ọ ga-abụ njem dị mfe ma dịkwa ụtọ. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na ọ bụ oghere ebumpụta ụwa iji jee ije, yabụ anyị kwesịrị iyi uwe dị mma na akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị maka ịga ije. Na mpaghara a, ihe dị mkpa bụ ịnụ ụtọ ọdịdị ala na ịma mma ha. Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ ụzọ ụkwụ njem dị nso maka ihe na-akpali akpali. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na a ga-echekwa uru okike nke oghere a, yabụ na ọ dịghị mkpa ịwụba ma ọ bụ mee ọkụ.
Ọ bụrụ na nleta na Black Lagoon dị mkpụmkpụ ma ọ bụ na anyị nwere oge ịhapụ, anyị nwekwara ike ịga obere obodo Vinuesa. Ọ bụ nnọọ mara mma obodo na na-echekwa mansions okwute ọdịnala, nke na-enye ya nnukwu amara. Ihe kachasị mma bụ ịgagharị n'okporo ámá ya dị warara ma hụkwa nnukwu ụka nke Virgen del Pino, nke na-egbu maka nha ya na obere obodo. Nwekwara ike ịga na Museum Museum ma ọ bụrụ na ị nwere oge, nwalee nnukwu gastronomy nke mpaghara ahụ na sausaji na anụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Black Lagoon nke Urbión